परिवर्तन स्विकार हुन समय लाग्छ
Friday, 16 Dec, 2016 2:19 PM
कमर्सियल​ बैंकबाट आफ्नो बैकिङ करियर शुरु गरेका झलक प्रसाद खनालले इन्भेष्टमेन्ट ,ज्योती विकास बैंक हुँदै भिवोर सोसाइटी बैंकसम्म आइपुग्दा बैंकिङ क्षेत्रमा झण्डै २३ बर्षको अनुभव सँगालेका छन् । हाल भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका खनालसँग भिवोर सोसाइटीको मर्जरपछिको पछिल्लो वित्तिय अवस्था ,विकास बैंकको चुनौती​का विषयमा न्यूजसेवाका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :
भिवोर सोसाइटीको मर्जरपछिको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
भिवोर सोसाइटी विकास बैंकले २०७३ भदौ १७ गतेबाट मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरू गरेको हो । मर्जर पछिको एकिकृत कारोबार भएको साढे तीन महिना मात्र भएको छ । यस विचमा हामी दुबै संस्थाका ग्राहक तथा खाता ,व्यवसाय , शाखा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने काममा लाग्दा पनि हाम्रो वित्तिय अवस्थाको बृद्धिदर स्वभाविक नै छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड ३४ लाख कमाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासलाई हेर्ने हो भने एकिकृत कारोबार पछि खासै प्रगति गरेको देखिएन नी ,किन होला ?
तपाईले त्यसलाई खासै प्रगति नभएको भन्न सक्नुहुन्छ तर म भने यसलाई स्वभाविक बृद्धि र राम्रै भएको ठान्छु । किनभने भदौ १७ मा मर्ज भएर भिवोर सोसाइटीले एकिकृत कारोबार शुरु गर्याे । एकिकृत कारोबार पछि जम्मा एक महिना जति कारोबार भयो । असोज २२ गतेदेखि त दशै विदानै पर्यो । सामान्यतया सिस्टमलाई स्मुथ्ली दौडाउनै पाएका थिएनौ , मोनिटर गर्ने ,विचार आदान प्रदान गर्ने ,असुली गर्ने जस्ता कुरानै स्पष्ट भएको थिएन । तर पनि हामीले जति नाफा कमायौ त्यसलाई राम्रो मानेका छौ ।
मर्जपछिको कारोबार कतिको सहज हुने रहेछ ? साढे तीन महिनाको अनुभवले के देखाउँछ ?
हेर्नुस् मर्जर आफैमा चुनौती हो । हामी कुनै देशमा भ्रमण गर्न गयौँ भने वा विवाह गरेर नै एउटा महिला श्रीमानको घरमा गइन् भने त्यहँँको संस्कृति र संस्कारलाई ग्रहण गर्न गाह्रैपर्छ । त्यसमाथि पनि व्यत्तिको स्वभाव आफुअनुकुल चल्नुपर्छ अर्थात परिवर्तनलाई सहजै स्विकार गर्न नसक्ने खालका हुन्छन् । बोर्ड परिवर्तन गरेर दुई सँस्था मिलेपछि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मनै सबै नयाँ हुन्छ । कर्मचारी ,सिइओ, व्यवस्थापन समुह, बोर्ड सबै नयाँ हुने भएकाले एडजस्ट हुन केही समय लाग्छ । तर यो कसैले भुल्नुहुदैन की सबै एउटै उदेश्यको लागि आबद्ध भएका हौँ भनेर । सँस्था राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच हुनु जरुरी छ ।
मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको हो ?
कुनै पनि सँस्था शत्तप्रतिशत पुर्ण हुदैन । त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि समय लाग्छ । हामी कर्मचारीलाई रिवार्ड गर्दैछौ ।
बैंकको कर्जा लगानी सहित अन्य सुचकांक कस्तो छ ?
हाल बैंकको निक्षेप १४ अर्ब ४० करोड ६० लाख रूपैयाँ र कर्जा प्रवाह ११ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । बैंकको व्याज आम्दानी पौने १३ करोडको हाराहारीमा छ । त्यस्तै चुक्तापुँजी १ अर्ब ८१ करोड ४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । पुँजी र शाखाका हिसाबले विकास बैंकमा हामी सबैभन्दा अगाडी छौँ ।
राष्ट्र बैंककले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउन अझै असार मसान्त नजिकिदै छ , कसरी पुर्याउनुहुन्छ ?
अझै हामी पाएसम्म एक्वाएर गर्ने नभए मर्जरमा गएर भएपनि तोकिएको चुक्तापुँजी पर्याउछौ । हाम्रो विश्वास भनेको शेयर होल्डरको खल्तीबाट पैसा हालेर बढाउने होइन, कमाएर दिने हो र मर्ज गरेर जाने हो ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंैकको लगानी कस्तो छ ?
हेर्नुस सरकार उत्पादनशिल क्षेत्र भनिरहन्छ तर कस्तो खाले उत्पादन ,कति उत्पादन भन्ने एकिन छैन । तर पनि उत्पादनशिलतामा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर उत्पादनशिलताको वाताबरण भने अझै बनेको छैन । सरकार आफैले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । हामी कृषि उर्जा,व्यापार ,व्यवसाय र घरजग्गामा लगानी गर्छाँै ।
पछिल्ला दिनमा विकास बैंकका चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
विकास बैंक त दोहोरो चेपुवामा छ । आम्दानी हुने ठाउँमा वाणिज्य बैंक मात्र जान्छ ,सरकारको बजेट खर्चहरु त्यहीँबाट जान्छ । सरकारी कर्मचारीको बचत सबै कर्मसियलमै हुन्छ तर विकास बैंकले निक्षेप र कर्जामा फेरी पनि तिनै बैंकहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वाणिज्य बैंक र विकास वैकको विभेद अझै हट्न सकेन । उनीहरूसँगको प्रतिश्पर्धा नै मुख्य चुनौती हो ।